Ukwazi amakhosombe we-APT nobuntu | Kusuka kuLinux
Sawubona kuwo wonke amaLinuxeros namaLinuxer. Namuhla sizobhekana nalesi sihloko, amasistimu wokugcina we Ubuntu.
3 Izingxenye ze-APT
4 Isebenzisa i-APT
4.1 Faka Izinhlelo Zokusebenza
4.2 Lungisa / Buyekeza Izicelo
4.3 Khipha Izinhlelo Zokusebenza
4.4 Khipha ngokuphelele Izicelo
4.5 Vuselela i-database
5 Awufuni ukukhumbula imiyalo?
Ubuntu futhi ama-distros asuselwa kuwo asebenzisa uhlelo I-APT. I-APT yasungulwa yiqembu le- Debian futhi kukhona igama elithi 'Ithuluzi lokuPhakamisa eliphambili'.
Ihlelwe ku- C nokusebenza kwayo kuqukethe, kuchazwe ngendlela elula, ukulanda amanye '.deb' kusuka kuseva ye-FTP (kulokhu kuvela ku-Ubuntu) bese uwafaka ngokuzenzakalela nge dpkg.
Lokhu kwenza kube lula ukufaka izinhlelo. Kepha-ke, akuzona zonke izinhlelo ezingaba kumaseva we-FTP. Ngakho-ke nansi iPPA.
I-PPA Okuvela ku-English 'Personal Package Archive' ngamafayela womuntu uqobo futhi ekuvumela ukuthi ulande futhi ufake izinhlelo ezingekho ezinqolobaneni ezisemthethweni. Ngokuvamile zihlala kuwo Qalisa iPad.
Isibonelo ngifuna ukufaka iphakheji 'roger / roger-mola' engekho ezinqolobaneni ezisemthethweni, ngakho-ke ngivula i-terminal (console, Shell, bash) bese ngifaka:
Sivuselela i-database: (kuchazwe ngezansi)
Futhi silanda Iphakheji:
Amaphakeji ahlukaniswe izigaba ezi-4:
Main: Kuqukethe kuphela amaphakheji ahlangabezana nezimfuneko zelayisense ye-Ubuntu, nokuthi yiluphi usizo olutholakala kuthimba lakho. Lokhu kuhloswe ukufaka konke okudingayo kumasistimu amaningi I-GNU / Linux injongo ejwayelekile.
Kukhawulelwe: Kuqukethe amaphakheji asekelwa onjiniyela be- Ubuntu ngenxa yokubaluleka kwayo, kepha ukuthi ayitholakali ngaphansi kwanoma yiluphi uhlobo lwelayisensi yamahhala ongayifaka ku- main.
Universe: Iqukethe izinhlelo ezahlukahlukene, ezingaba noma ezingenayo ilayisense ekhawulelwe, kepha ezingasekelwa yi Ubuntu kodwa ohlangothini lomphakathi. Lokhu kuvumela abasebenzisi ukuthi bafake zonke izinhlobo zezinhlelo ohlelweni ngokuzigcina endaweni ehlukile kusuka kumaphakeji asekelwayo: main y ivinjelwe.
Ezihlukahlukene: Iqukethe amaphakheji angasekelwa ngoba awahlangabezani nezidingo zesoftware yamahhala.
I-APT Inokusetshenziswa okuningi, lapha ngikukhombisa izisekelo:
Faka Izinhlelo Zokusebenza
Lungisa / Buyekeza Izicelo
Khipha Izinhlelo Zokusebenza
Khipha ngokuphelele Izicelo
Awufuni ukukhumbula imiyalo?
Yebo, uma ungafuni ukukhumbula imiyalo onayo:
Isikhungo se-Ubuntu Software
Amandla alandwe ngephakheji: ukufaneleka
I-Synaptic elandwe ngephakeji: synaptic
Ngiyethemba nje ukuthi ukuthandile, ngoba ngikuthandile ukubhala lokhu. Maduze ngizofundisa bobabili i-YUM ne-PACMAN. Kuze kube yisikhathi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ukwazi izinqolobane ze-APT nezobuntu
Okuthunyelwe okuhle ukuze ube nolwazi ngokusebenza kwe-APT 😀
ungakhohlwa ukuthi "ngosesho lwe-apt-cache" ungasesha uma ngabe iphakethe likhona ezinqolobaneni noma kumaphakeji ahlangabezana nencazelo. : 3
usesho lwe-apt-cache nokia
usesho lwe-apt-cache lxde
usesho lwe-apt-cache nokia | ukuphathwa kwe-grep
Siyabonga ngomnikelo, ngilinde abalandelayo nge-YUM ne-PACMAN
Uphuthelwe i-Apper yalabo abasebenzisa i-KDE.
Ngaphandle kwalokho, kubonakala sengathi inguqulo yeWindows yeWindows Forefox iyathuthuka ngokunikezela kanye ne-interface uqobo yama-PC angasebenzi.
Ngicabanga ukuthi isenzo esihle soMozilla kungaba ukuthi iFirefox OS ayibonwanga yizinhlelo zeWindows (ukukhanyisa, ukukopisha idatha), ngokuthembeka, ngiyayiseka kakhulu i-FFOS kepha ngicabanga ukuthi iluhlaza kakhulu, uma ihlanganisa ukuhambisana ne-Android njenge I-Tizen noma i-Sailfish OS iyakwenza, ngiyaqiniseka ukuthi ngifaka i-Moto G. yami.
Izicelo ezikwiFirefox zenzelwe ukuthi zikwazi ukugijima kunoma iyiphi ipulatifomu, ngoba kubo ipulatifomu iyiwebhu.
Abamunca iMozilla ukuthi i-HTML5 igcina inqobile, yize ngenhlanhla ithola indawo eyanda ngokwengeziwe; Ngalokhu, iFirefoxOS ifuna ukuthi izinhlelo zokusebenza zenziwe ngamapulatifomu amaningi, zikwazi ukusebenza kunoma yisiphi isiphequluli sohlelo olusebenzayo. Okunye futhi ukuthi ovelele benze into yabo ukuze kungenzeki lokho, noma bahlehlise ukubusa kwabo. Abathuthukisi abanalokhu bazokhipha izicelo zawo wonke amapulatifomu, nokugcinwa kwabasebenzi okubandakanya.
Ngifunde ekuphawuleni kwakho «(…) IMozilla iyabamba ukuthi i-HTML5 (…) »… LOL!, Bengicabanga ukuthi awuvumelani nombono we-HTML5 noMozilla, kepha ukufunda kangcono ngiyabona ukuthi ubungaqondile ukusho ukuthi yi-sucks, kepha apulokhu haha
Kube neprojekthi ethi: "Udalela iLinux futhi iyahambisana nakuWindows" (Akuyona i-cygwin noma iCoLinux), ngeshwa yayingenakusasa (okungenzeka kwenzeke ku-HTML5). Ngibheja ku-HTML5.
Kukhona iphrojekthi ebizwa nge-Phonegap, ewusizo kakhulu, empeleni ngithanda i-HTML5 kakhulu kangangokuba ngakha uhlelo lokusebenza lwewebhu ye-Eliotime. (Ungathola iphrojekthi ye- (Mega Ultra Bugeado xD) eGithub).
Masishiye i- «Off-Topic» yeFirefox ne-HTML5 ngoba ayihlanganise lutho ne- «APT kanye nezinqolobane zeCanonical Ubuntu»
Nali iphutha xd
i-sudo apt-add-repository roger / roger-mola
okokuqala kufanele ubeke i-ppa * colon * roger / roger-cool xD
i-sudo apt-add-repository ppa: i-roger / i-roger-mola
Kubonakala kimi ukuthi umyalo wokwengeza ama-PPAs awulungile, ngokungeziwe kukholoni ukuthi i-atlas7jean iphawula, i-syntax yomyalo ayilungile ngoba iyindawo yokugcina, esikhundleni se-apt-add-repository.
Isibonelo esikhonjisiwe kufanele sibukeke (ngokusho kwami) kanjena:
$ sudo engeza-apt-repository ppa: roger / roger-mola
Umyalo wokufaka i-ppa awulungile. Kungabonakala kanjena: "i-sudo add-apt-repository ppa: [igama le-ppa]"
ngaphandle kwalolo lwazi oluhle, kepha bengangeza eminye imiyalo. Isibonelo, lapho ufaka, ungafaka amaphakheji ambalwa ngomyalo ofanayo, okungukuthi, "i-sudo apt-get install [package1] [package2]". uma ungeza -y ngaphambi kwe- "install" akubuzi ukuthi uqinisekile ukufaka.
Udinga futhi ukucacisa ukuthi ungawahlanza kanjani amaphakheji aphelelwa yisikhathi lapho ukhipha uhlelo, "sudo apt-get autoremove" uma ungeza - ukukhuphuka kususa ngokuphelele
Into embi engiyibonayo ezinqolobaneni ze-PPA ukuthi abaningi abajwayele ukuba nohambo olude, yize ngakolunye uhlangothi izinhlobo ezahlukahlukene ze-Ubuntu yiyona ehlanganiswe kakhulu ngobuningi.
Okuthunyelwe okuhle kakhulu ngikuthandile njengoba ngingumsebenzisi we-novice oqala kulo mhlaba we-linux, njengamanje ngisebenzisa i-mint petra nesinamoni engicabanga ukuthi iyi-distro enhle kakhulu yabasebenzisi be-novice, futhi lolu hlobo lokuthunyelwe lusiza kakhulu kithina abasebenzisa kutholwe ama-distros we-debian. Ngizolinda okuthunyelwe kwakho kwe-YUM NE-PACMAN ngoba kungasiza kakhulu ukubheka i-openuse eyaziwayo ne-archlinux nokunye okunjalo.
Ngiyabonga kakhulu ngolwazi lwakho, abantu abanjengawe yibo lo mphakathi ocebile ngolwazi.